Ukuphupha nge-taubstumm Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuba sisithulu nesimumu kuthetha ukungakwazi ukuva okanye ukuthetha. Abantu abaziziThulu badla ngokubizwa ngokuba bazizithulu kwaye abazizidenge, kodwa oku kuhlala kungalunganga kuba abakwazi kuva kodwa bayakwazi ukuthetha.
Amagama athethwayo okanye izandi, nangona kunjalo, zivakala ngokwahlukileyo, kuncinci kunesandi kunabantu abevayo, kuba umntu ochaphazelekayo akanakuliva ilizwi lakhe ngenxa yokungeva. Ke ngoko, abanye abantu banokufumana lula umbono wokuba abamva okanye bathethe. Ukuqinisekisa ukuba unxibelelwano luqhubeka nokuba yimpumelelo, izifundo kubantu abazizithulu nezisisidenge zinokufunda indlela yokuqondakala ngentetho yezandla.
Nokuba siyintoni na esi sibakala, sinako ukuba nephupha lokuba thina okanye abanye abantu singeva okanye sithethe. Ukutolikwa kwamaphupha, uphawu lwephupha "isithulu nesidenge" lunokunika imikhondo eyahlukeneyo enokuthi ichaphazele ubomi bephupha kunye nobabanye abantu.
1 Uphawu lwephupha "isithulu nesidenge" - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isithulu nesidenge» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha "isithulu nesidenge" - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha "isithulu nesidenge" - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba sizibonile sisisithulu kwaye sisisimumu el mundo amaphupha, kubalulekile ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha ukuba yayinjani kanye imeko yephupha. Oko kuthetha ukuba yeyiphi imeko ekufuneka sive ukuba asinakuva okanye sithethe.
Ukungakwazi ukwenza zombini kungasongela ukulala. Mhlawumbi ubukwiqela labantu kwaye ufumanise ukuba awunakuva zandi zikungqongileyo. Okanye iphupha laye lasondela emntwini kungekho nelinye lamagama athethwayo afikelela kuye. Mhlawumbi ukhe wazama ukunxibelelana. Kwaye kwafuneka aqonde ukuba ngoku, ngequbuliso, ilizwi lahamba.
Amaphupha anjalo afuzisela ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha athi, kwihlabathi lokwenyani, umntu angakwazi ukuba sisithulu kwiimfuno zabanye kwaye axakeke kakhulu kuye. Ukuba sisimumu esisimumu kubhekisa kwi Unomdla unxibelelwano notshintshiselwano kwezentlalo.
Ngamanye amaxesha umfanekiso ophuphayo "osisithulu kunye nesidenge" unokubonisa uloyiko lwangempela lwezempilo. Ukuba sele kukho ilahleko yokuva ngesiquphe okanye i-tinnitus, kunokukhathazeka iingcinga malunga nokuba ukuva kuya kuba njani kwixesha elizayo.
Ukuba sisithulu kwaye sisidenge ephupheni kukubonisa nje okwethu ukungenisa y uloyiko kwaye akufuneki iqondwe njengesibhengezo sokonakala ngokwenyani kwezempilo.
Uphawu lwephupha «isithulu nesidenge» - ukutolikwa kwengqondo
Kungenzeka futhi ukuba ephupheni sidibana nomntu osisithulu nongathethiyo nokuba sizama ntoni na, unxibelelwano aluphumeleli kuba asilwazi ulwimi lwabangevayo nabangevayo. Usenokuziva ulahlile, ulusizi, okanye ungenakuzinceda kuba ufuna ukuthetha into ebalulekileyo komnye umntu, ohlunguzela nje intloko engakholelwa.
Ukusuka kwindawo yokujonga iitoliki zengqondo zamaphupha, amava anjalo ephupha asibonisa ukuba kubomi bokwenyani sinako ukuba nemvakalelo ukungahoywa. Asinakuze sicelwe uluvo lwethu okanye into esiyithethayo irhaxwe bubuninzi bezinye iingxelo ngaphandle kokuphawula.
Umzamo ongxamisekileyo ephupheni lokuseka unxibelelwano ubonakalisa ngokucacileyo ukuba umntu unqwenela kangakanani kubomi bemihla ngemihla ukudityaniswa nokwaziwa ngabanye njengomntu obalulekileyo kwaye onomdla.
Ukuba sisithulu kunye nesimumu kungabonisa ukuphupha kukho imiba ebomini bakho okhetha ukuyimamela okanye ukwala ukuyimamela. Ukuva inyani okanye ujongane nayo ngomlomo.
Uphawu lwephupha "isithulu nesidenge" - ukutolika kokomoya
Ngokwembono yokomoya, umfanekiso wephupha "osisithulu nesimumu" umele enye Unxibelelwano luvalekile. Ukuphupha uziva ngathi kukho ukuphazamiseka okunxulumene nehlabathi lomoya, ke kunokuba kusengqiqweni ukuzibeka esichengeni sokuphazamiseka kwangaphandle kangangoko kunokwenzeka.
Cinga okanye usebenzise ukuthula kwendalo ukuphinda uziva unxibelelwano noThixo.